Woqooyiga Kuuriya oo gantaal cusub tijaabisay - BBC News Somali
Image caption Qaar ka mid ah gantaalaha Kuuriyada Woqooyi oo dhoolla tus lagu soo bandhigay
Koonfur Kuuriya ayaa sheegtay in dalka Woqooyiga Kuuriya ganay gantaal aan noociisa la garanayn oo ku dhacay badda Japan Sea.
Tijaabadaa hore markii bishii Feberweri ay fulisay, waxa cambaareeyey Qaramada Midoobay, Maraykanka, Koonfur Kuuriya iyo Japan.
Sarkaal ka tirsan ciidanka Koonfur Kuuriya ayaa sheegay in ay baadhayaan gantaalkan cusub ee la ganay iyo tiknoolajiyada loo adeegsadayay, waxaanu sheegay in la ganay saacaddu markay ahayd 07:36 aroornimo ee wakhtiga Kuuriya maanta oo Isniin ah.
Beryahan dambe hawlaha ka socday gobolka Tongchang-ri oo ah halka uu ku yaal saldhigga Sohae ee laga gano dayax gacmeedyadu, ayaa walaac ku abuuray saraakiisha Japan.
Woqooyiga Kuuriya waxay marar badan sheegtaa in barnaamijkeeda tiknoolojiyada hawada sare yahay mid nabadeed laakiin waxa la rumaysanyahay in ay damacsantahay in ay samaysato gantaalaha qaaradaha isaga gudba si ay weerar ugu ekayso Maraykanka.